Iilwandle eziGqwesileyo kwiSixeko saseNew York kweli hlobo - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Ezona Zilwandle Zona Zisemgangathweni zeNew York City ukuba zibethe ngeli Hlotyana-kwaye Lowo kufuneka uphephe
Ezona Zilwandle Zona Zisemgangathweni zeNew York City ukuba zibethe ngeli Hlotyana-kwaye Lowo kufuneka uphephe
Amanxweme aseNew York City avulelwe ukubhukuda ngoMeyi 26.UStephanie Keith / Getty Izithombe
Ihlobo ekugqibeleni lilapha! Oko kuthetha ukuba lixesha lokubetha elunxwemeni, ukuqubha kunye nokuhlala elangeni. Kodwa zininzi iilwandle onokukhetha kuzo. ISebe lePaki noLonwabo lesiXeko saseNew York lisebenzisa iilwandle ezisibhozo ezahlukileyo ezihamba ngaphezulu kwe-14 yeemayile zonxweme, yonke into isuka kwiConey Island eyaziwayo kunye neRockaway Beach ukuya kwindawo encinci neyozolileyo yaseMidland Beach eStenen Island.
Nanku ukukhangela kwinto nganye elunxwemeni olunokukhahlela-kwaye apho kufuneka uye khona ukuba ufuna ulwandle olunesixa esincinci, ulwandle lolona lonwabisayo kwaye lunamandla, okanye ukuba ujonga nje elunxwemeni oluza kukubonelela ngoxolo nokuzola kwizitrato eziphithizelayo eziphithizelayo ze-Big Apple.
Umbonisi naye waya phambili wathatha iSebe leePaki licocekile kancinci Imibuzo evumela abantu ukuba babone ukuba loluphi ulwandle olulungele bona, ke abantu baseNew York banokuba nolwazi ngamava elwandle ngalunye. (Ungayithatha ngokwakho umlinganiso ochanekileyo.)
Kwaye qaphela ukubhalisa ukufumana izilumkiso zombhalo wasimahla kulwandle malunga neengcebiso zomgangatho wamanzi kunye nokuvalwa ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuya nakwezinye iilwandle. Ungatsalela umnxeba nge-311 ngaphambi kokuba uye elunxwemeni okanye uthumele umyalezo nge-BEACH ku-877-877.
IConey Island Beach
Abatyali bematshi kwi-2017 Mermaid Parade eConey Island.UAlex Wroblewski / Getty Izithombe
IConey Island ebalaseleyo eBrooklyn, enayo kufutshane neemayile ezintathu yolwandle olunesanti, inendawo eninzi yokuba abantu bakhuphe iitawuli zabo kwaye batshone elangeni okanye bazonwabise kumaza aqengqelekayo.
Kwaye ukuba ujonge ezinye izinto onokuzenza ngaphandle kokubhukuda emanzini, iConey Island inemisebenzi enxulumene non-manzi. Ungadlala ibhola yevoli yaselwandle, ibhola yesandla kunye nebhasikithi kwiinkundla zayo. Ukuba ungumntwana, kukho amabala okudlala apho ungatsiba khona kwaye wonwabe. Kwaye masingakulibali iLuna Park, esandula ukutyhila i-Astro Tower, a ukukhwela okutsha emi kwi-137 yeenyawo ubude, kunye neNew York Aquarium.
Kuya kufuneka ujonge i-Coney Island Mermaid Parade yonyaka wama-36, eyona parade inkulu eUnited States eqala ixesha lonyaka lasehlotyeni. Umngcelele uya kubanjwa ngoMgqibelo, nge-17 kaJuni nge-1 emva kwemini.
Okwangoku, ngenxa yokuba yindawo ephezulu yabakhenkethi kunye nendawo eshushu kubantu abaninzi baseNew York, inokuxinana kwaye isenokungabi yeyona ndawo ilungileyo yokuba nosuku olunoxolo elangeni.
Amava eConey Island Beach (Iziphumo zeMibuzo):
Njengonxweme olubonakalayo lwaseBrooklyn, ububomi beqela, ngakumbi ukuba elo theko libandakanya imisebenzi yomlilo, ukukhwela okonwabisa, i-aquarium kunye nokunxiba okuninzi. Uyayithanda iMermaid Parade yonyaka kwaye uyazi ukuba akukho ndawo ilunge ngakumbi yokutya elunxwemeni kuneNathan's Izinja ezishushu ezishushu kunye nefry.
Indlela yokufika eConey Island Beach :
Thatha uloliwe u-F, D, N okanye u-Q ukuya kwi-Avenue ye-Stillwell. Yehla kwindawo yokugqibela.
Abantu baseNew York baxhonywe eRockaway Beach.Andrew Burton / Getty Izithombe
I-Rockaway Beach eQueens, ethi band punk rock I-Ramones yatsho ukuba iya kukhwela kwi-Rockaway Beach yayo ingoma, uyabona izigidi zabakhenkethi Ngexesha lasehlotyeni, ukuqala ngeSikhumbuzo seveki yeSuku kwaye ukuya kuthi ga kwiVeki yoSuku lwaBasebenzi. Emva kwenkanyamba iSandy ngonyaka ka-2012, ulwandle luye lwabonisa ukuzingisa kwesixeko kunye nokukwazi ukuqhubela phambili kulandela intlekele enkulu.
Kukuphela kolwandle oluselunxwemeni olusemthethweni, olunemvume emininzi, amabala okudlala kunye neminye imisebenzi yangaphandle. Abantu baseNew York kufuneka bajonge iklabhu yeRockaway Beach Surf Club yesithathu yonyaka yoMnyhadala woMbala ngoJulayi 7.
Kodwa oku kunokuba lolunye unxweme omele ukuluphepha kweli hlobo-ubuncinci.
Kwinyanga ephelileyo, iSebe leePaki labhengeza ukuba ulwandle lolwandle-isitrato sama-91 ukuya kwisitrato i-102-Street ivaliwe ngeli hlobo ngenxa yokhukuliseko lomhlaba. Abantu abahamba elwandle bathi abavunyelwe nditsho nokuhamba ecaleni kolula oluvaliweyo.
Abahlali baseRockaway kutsha nje ibanjiwe umngcwabo wokuhlekisa elwandle ukuphendula ukuvalwa.
Ezinye iinxalenye zolwandle ziya kuhlala zivulekile, kunye nayo yonke indlela ehamba ngebhodi, lonke unyinyiso kunye nendawo yokuphumla. Olona kufutshane ulwandle lufumaneka kwiBeach 86th nakwiindlela zoLwandle ezili-103.
Amava eRockaway Beach (Iziphumo zeMibuzo):
Ungumhambi wolwandle onomdla, othanda ulonwabo onokuluxabisa olu lwandle lwaseQueens oluqhelekileyo, oluqukethe kuphela ulwandle lwaseNew York City. Kwaye usuku eAtlantic lubiza isidlo esikhethekileyo, njengeetacos kwindawo yayo ekufutshane netaco kunye nokunye ukutya.
Indlela yokufika kwiRockaway Beach:
Thatha uloliwe oya kwisikhululo seteshini esibanzi emva koko udlulisele kwinkonzo ye-S shuttle ukuya kwiRockaway-Beach 116th Street.
Ibhitshi leOrchard kwiBronx.Iipaki ze-NYC
Unxweme lweziqhamo — i lolwandle loluntu kuphela kwiBronx eyathi yaziwa njenge-Riviera yaseNew York xa yayiqala ukusekwa ngeminyaka yoo-1930-ikufumene konke: amabala okudlala, iindawo zepikiniki, ibasketball, ivolleyball nenkundla yebhola yesandla, imigoqo yokutya okutyayo, indawo yokuhamba kunye nendawo esembindini.
Amava olwandle lwe-Orchard (Iziphumo zeMibuzo):
Uyakuthanda ukuzonwabisa, uyazi ukuba yintoni inyonga, kwaye uthanda ukuya kuzo zonke iikonsathi zasimahla zesixeko zasehlotyeni. Uyilungele ngokwendalo ‘iRiviera yaseNew York,’ elunxwemeni lweehektare ezili-115 eBronx, nenqanawa yayo, iindawo zokutya, neenkundla ezingama-26 zebhola yomnyazi, ibhola yevoli kunye nebhola yesandla. Okubaluleke kakhulu? Iibhantshi zaselunxwemeni, kunye nemidlalo yasimahla yomculo rhoqo ehlotyeni.
Indlela yokufika kwi-Orchard Beach:
Thatha uloliwe o-6 uye kwisikhululo sasePelham Bay, indawo yokumisa yokugqibela eBronx, emva koko uthathe ibhasi eyi-Bx12 uye e-Orchard Beach. Unokuthatha ibhasi ye-B29 uye eRodmans Neck kwibhasi ye-Bx12 kwaye wehle kwi-Orchard Beach.
Cedar Grove Ibhitshi kwiStenen Island.Iipaki ze-NYC
I-Cedar Grove Beach eStenen Island, eyona nxweme intsha yedolophu eyayisakuba yindawo yolwandlekazi lwe-bungalow koloni, encinci kunye noxolo olungaphezulu kweMidland Beach kunye neSouth Beach-nazo zombini eStenen Island-kwaye zinomtsalane othile kunye nokuthandeka kwayo. Iintsapho ezikuloo ndawo zinokonwabela ukuya elwandle ngenxa yeso sizathu.
Olu lwandle lunokugcwalisa ngokukhawuleza, kodwa ukuba ukhetha ukhetho oluncinci noluzolileyo, iCedar Grove isenokuba lolwandle kuwe.
Amava eCedar Grove (Iziphumo zeMibuzo):
Uyakonwabela ukuphonononga iikona eziyimfihlo zesiXeko saseNew York, njengale yolwandle iStaten Island esandula ukufunyanwa. Indawo encinci, ethuleyo yindawo efanelekileyo yabantu abanjengawe, abathanda ukuba nexesha lokuphumla esixekweni.
Indlela yokufikelela kwiCedar Grove:
Thatha isikhephe esihamba ngenqanawa iStaten Island emva koko uthathe ibhasi eyi-SB86 uye eCedar Grove Beach.
IManhattan Beach eBrooklyn.Iipaki ze-NYC
superman hayi kwezobulungisa kwiligi yeligi
Kanye kwincam esemazantsi eBrooklyn, IManhattan Beach Park yeyona ndawo ifanelekileyo onokuhamba kuyo ukuba ufuna ukuphola kwaye ube nebarbecue okanye ipikniki kwaye uziphose kumaza. Ngakumbi, kukho amabala okudlala, iidayimani zebaseball kunye neenkundla apho ungadlala khona intenetya, ibhola yevoli, ibhola yomnyazi kunye nebhola yesandla, ke yindawo entle kuye nabani na onwabela imisebenzi yangaphandle.
Amava eManhattan Beach (Iziphumo zeMibuzo):
Usuku olugqibeleleyo lwehlobo lwakho lubandakanya ukuphuma kosapho, ukugqibezela ukupheka kunye nokuhamba ecaleni kwendlela. Uyazi iilwandle ziindawo ezifanelekileyo zokudala iinkumbulo zehlobo zakho kunye nosapho lwakho okanye abahlobo.
Indlela yokufika eManhattan Beach:
Thatha uloliwe u-B okanye u-Q uye kwi-Brighton Beach stop uze uthathe ibhasi ye-B1 eya eManhattan Beach.
South Beach kwiStenen Island.Iipaki ze-NYC
Ulwandle lwaseMzantsi eStenen Island, enye yeendawo ezingaselunxwemeni zedolophu, ineesanti ezinombala o-orenji, kwaye ufumana ikhefu elimnandi kuxinzelelo lwe-Big Apple ngamaza oLwandlekazi lweAtlantic. Ukungathethi, iSouth Beach inezinto ezicocekileyo zokuzonwabisa-mhlawumbi amava awodwa nahlukileyo kwizihlwele eConey Island eyaziwayo.
Amava oLwandle lwaseSouth (Iziphumo zeMibuzo):
Uyakuthanda ukubaleka ngamanye amaxesha, kwanakwisixeko esixakekileyo. Unokuba nomdla wokuloba kwi-Ocean Breeze Fishing Pier, enye yezona ndawo zidume ngokuloba kwesi sixeko. Okanye ungangxama ukuhla uyijonge emanzini. Ungathatha ithuba lokuhamba ngesikhephe ngeStaten Island Beach, iinkundla zentenetya okanye iindlela zebhayisekile, okanye ukhululeke nje ngokuthatha ikhefu ecaleni kwendlela yebhodi.
Ukufika njani kulwandle lwaseMzantsi:
Thatha i-X1 ibhasi uye eHylan Boulevard / Midland Avenue uze emva koko uye kwi-S51 ukuya kwi-Father Capodanno Boulevard / Cromwell Avenue.
'Ukuzisa iiBates' EP: 'AsiyoSapho lakwaDuggar'
Ngaba uSmith 'weGemini Man' Ngaba yiMassive Flop-Ngaba iya koyikisa iChina yaseHollywood Imali?
I-Monster yeqela uMichael Alig ubhiyozela uSuku lokuqala lweNkululeko kwi-Twitter
'MasterChef' Ukuhlaziya kwakhona ixesha lesi-5 lokugqibela: Isiphelo esimnandi nesikrakra
Eyona Softener yaManzi: Ukujonga kunye nesikhokelo somthengi 2021
Isizwe sicinga ukuba u-Amy Winehouse akakho Mnyama ngokwaneleyo
Uvandlakanyo lweematrasi ngo-2021: Ngaba kufuneka uthenge?
UWiz Khalifa uxelwe ukuba ubhubhile… Enkosi ku-Kanye West
I-Senate kaRhulumente 2017 yeKhadi leNqaku: Ukuza kweNkqantosi
I-FDU: Ukwamkelwa kwemilinganiselo ka-Obama kuye kwi-55%
Iingcali zithi uMngcipheko weMfazwe weNyukliya ucacile, ngoku nakwixesha elizayo
Abayili beFashoni abatyebileyo baseNew York
Imars ijongwa ngcono emhlabeni xa ise
Uhlala phi ujason bateman
izongezo zokuphilisa udonga lwesisu
iintlanzi zihlala zihlola indawo